အသက်ပင်ကြီးသော်လည်း…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Other - Non Channelized » အသက်ပင်ကြီးသော်လည်း….
Posted by panpan on Aug 3, 2011 in Other - Non Channelized | 20 comments
စိတ်ပျို ကိုယ်နု အိုးမော်ဒန်
ခုခေတ်မော်ဒယ်တွေတပ်တဲ့ မျက်မှန်လောက်တော့ သနားတယ်
ဟိုး….တုန်းက တို့နှစ်ယောက် ဒီပန်းခြံထဲမှာ ဒီလိုပဲ ဆော့ခဲ့ကြတာ
ဘွားဘွားတို့ကတော့ အေးဆေး၊ ခပ်မိုက်မိုက်ပဲနေတယ်
ခုထိ ကနိုင်တုန်း၊ သွက်လက်တုန်း
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်၅၀လောက်ကဆို ဒီလိုလျှောက်ရင် မြင်သူငေးရတာပေ့ါကွယ်
ပုံလေးတွေကြည့်ရတာ ရီရတယ်၊ ကျေးဇူးနော်
ဟဟ…. ပုံလေးတွေက လန်းတယ်။ အသက်ကြီးပေမယ့် သန်တုန်းမြန်တုန်းလို့ ပြောနေသလိုပဲနော်…..
အသက်ကြီးလဲ ဒီလိုအလန်းစား ဖက်ရှင်တွေနဲ့
အပြတ်မိုက်လို့ ရပါသေးတယ်နော် …………..
ကိုယ်လည်း အသက်တွေ ကြီးတဲ့ အချိန်မှာ.. အဲဒီလို..လန်းနေ မှ..ပဲ လို့ တွေးမိလောက်အောင်ကို ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ပုံလေးတွေ ပါလား။ ရှာရှာဖွေဖွေ တင်ပေးလို့ပန်ပန့် ကိုကျေးဇူး အများကြီးတင်တယ်နော်။
တစ်ခုပဲ……အောက်ဆုံးပုံ ထဲ က တစ်ယောက်ကတော့..တော်တော် ဟော့ တယ်နော့။
ဒီပုံတွေ ထဲ က
တစ်ပုံပုံ က တော့
pan pan ပုံ ဖြစ်နိုင်လောက်တယ်
ဘယ်သူနိုင်နိုင်ဆိုတဲ့ပုံမှာ အနီရောင် ကလေးကားလေး မောင်းနေတာလေ
စိတ်ထောင်းတော့ကိုယ်ကြေတယ်တဲ့။ စိတ်ပျိုတော့ကိုယ်နုတယ်တဲ့။ ငယ်ငယ်တုန်းက တရားထဲမှာ ပါတဲ့ခန္ဓ၀န်ထမ်းရတာ အရမ်းလေးတယ် ဆိုတာ ကို အရင်က သဘောမပေါက်ဘူး။ အသက်ကြီးပြီး ကိုယ်အရိုး ကို မသယ်နိုင်တဲ့သူတွေ တွေ့တော့မှ ခန္ဓ၀န် ဆိုတာကို သဘောပေါက်သွားတယ်။
ပန်ပန်တို့ ရောင်ခြည်ခ တို့ မိုးပွင့်ဖြူတို့ မမတို့ မနောတို့ အုပ်စုကတော့ ကဲလို့ကောင်းတုန်းပဲကိုး…………..
အံမာ ကိုကြောင်နဲ့ ကိုပေါက်တို့လဲ ကိုခိုင်နဲ့ ကဲနေပါလား?
That’s good.Our villagers will be more active anf hopeful for “hot” habbit.
အဘတောင် ဒီပုံလေးတွေကြည့်မိကာမှ သီလယူဘို့မေ့သွားတယ်ကွယ်
သူကြီးက ဘွားဘွားကြီးမသိအောင်… အလန်းစားလေးတွေနဲ့ နှစ်ပါးသွားနေတယ်။
Yan Shin ကလည်း ခုချိန်ထိ ဘယ်သူနိုင်နိုင် …. ကလေးနဲ့အပြိုင် ကဲကောင်းတုန်းပေ့ါ။
ကိုပေါက်နဲ့ မဒမ်ပေါက်တို့ အတွဲကလည်း ခုထိ ကနိုင်တုန်း၊ သွက်လက်တုန်း လေ။
ဟဟငါကြိုက်တယ်ဟ..အဲ့ သလိုလေးတွေ ….
အသက်ကြီးကြီးတွေ ရဲ့ ပုံတွေတင်ပြီး
အသေးလေးပုံ…အဲ မှာလို့ ငယ်ငယ်လေး တွေရဲ့ ပုံတွေလဲတင်ပါအုံး။ဟိဟိ..
အသက်ငယ်ငယ်လေးတွေ ပုံတင်ပါဆိုလျှင်ဖြင့် … ဘိုးတော်ဘုရားလေးဘက်သွားတဲ့ ပုံတောင် ပါလာနိုင်ဒယ် ၀ူးးးးးးးးးး
ဘိုးဘိုးကြီးက ဘွားဘွားကြီးမသိအောင်ဆိုတာ ကိုခိုင်ကိုပြောတာနေမှာ….
အသက် အရွယ် ကြီးတဲ့ လူကြီးတွေ.. သူငယ်ပြန်ပြီး ကလေးဆော့တာ တက်ဆော့ပြီး မြောင်းထဲ ကျတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကို ရီစရာ မျက်လုံးနဲ့ မကြည့်ပါနဲ့.. သူတို့ မှာ ပူလောင်တဲ့ ဘ၀ ဒဏ်တွေကို နှစ်ပေါင်း များစွာ ခံပြီး စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ရဲ့ ထွက်ပေါက် အဖြစ် သူငယ် ပြန်နေကြတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
နှစ်ပေါင်း များစွာကို တမနက် တနာရီ နဲ့ စိတ်ကူး ဖြတ်သန်းတွေးဆ နိုင်တဲ့ လူစားမျိုးတွေပါ။
အဲဒီ အရွယ် အဘိုး အဘွားတွေ မပြောနဲ့ အသက် ၃၀ ၄၀ ၅၀ အရွယ်တွေလည်း သက်တူ ရွယ်တူ နဲ့ တွေ့ရင် ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်တွေ ပြောပြီး စိတ်ထွက်ပေါက်ပေးကြတာပါပဲ။ တချို့ပုံတွေ ဓါတ်ပုံ ဆရာ ဇတ်ဆင်ပြီး ရိုက်ထားတာလားတောင် တွေးမိတယ်။ ကိုယ်လည်း သူတို့ အရွယ် တချိန် ရောက်အုန်းမှာပဲလေ။
It’s not ” ကလေးဆော့တာ တက်ဆော့ပြီး မြောင်းထဲ ကျတာ ”
It’s called ” Mobility scooter “, motorized mini car designed for elder people.
In Australia, at least 75% of elder people rides them.
They make every roads, pavements, entrances, lifts & supermarkets suitable for this Mobility scooter.